Dr. Tint Swe's Writings: In Quest of Democracy ဒီမိုကရေစီရှာပုံတော် (၁)
In Quest of Democracy ဒီမိုကရေစီရှာပုံတော် (၁)
သမ္မတသစ်နဲ့ ခေါင်းဆောင်သစ်တွေ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီးကြပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ရေးသားခဲ့တဲ့ Quest for Democracy ဒီမိုကရေစီရှာပုံတော် ဘာသာပြန်ထဲက ကောက်နှုတ်ချက်ကို တင်ပါရစေ။
မင်းမှာသစ္စာ လူမှာကတိဟူသော ဆိုရိုးစကားအရ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေဖြင့် ၄င်းပေးခဲ့သောကတိအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရုံမျှသာ လိုအပ်သော်လည်း အုပ်ချုပ်သူတို့မှာမူ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ အရ သစ္စာတရားကို အစဉ် ထိန်းသိမ်း ထားကြရပါမည်။ သစ္စာတရားသည် ဗုဒ္ဓဘုရားအဆုံးအမသြဝါဒများ၏ အနှစ်သာရပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည် မိမိကိုယ်မိမိ တထာဂတ သို့မဟုတ် သစ္စာတရားသို့ရောက်ရှိလာသည်ဟု ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မင်းတို့သည် သူ့အမည်သညာနှင့် သူ့သဘာဝ အစဉ်ထာဝရ ညီညွတ်ဖြောင့်မှန်ခြင်းတည်း ဟူသော သစ္စာတရားနှင့်အညီ နေထိုင်အုပ်ချုပ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူလူထုကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမူ၊ အထင်မှားအမြင်မှား ဖြစ်စေမူ စသည်တို့သည် အလုပ်ဝတ္တရား ပျက်ကွက်ချွတ်ယွင်း၍ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
• မြားနှယ်စင်း၍၊ ဝမ်းတွင်းဖြောင့်တန်း၊
• မကောက်ယွင်းတည့်၊ တစွန်းဟက၊ နှစ်ခွမသွေ၊ (စတုဓမ္မသာရပျို့ )
အုပ်ချုပ်ရာ၌ စိတ်ထားနူးညံ့မှု (မဒဝြ) ဟူသည်မှာ ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက် စိုးရိမ် ပူပန်ကြောင့်ကြမှုကို ခံစားနိုင်သော သတ္တိပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုနိုင်စွမ်း အလွန်နည်းပါးနေသူတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ၄င်းတို့၏လိုအပ်ချက်ကို ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်အရေးယူလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းထက် ပို၍ လွယ်ကူသည်မှာ မငြင်းနိုင်သောအချက်တခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတပါးကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည် တာဝန်ယူခြင်းပင်ဖြစ်၍ အားနည်းသူတို့၏အားသည် မင်းဖြစ်သည်ဟူသောအဆိုအတိုင်း လုပ်ရဲခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
In Quest of Democracy ဒီမိုကရေစီရှာပုံတော် (၂)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရှင်များက သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအကြောင်းအချက်များကို သေချာစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာ၍ အသေးစိတ်အဖြေများကို ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သားတို့ကမူ ယင်းသို့သော ခေတ်မီပညာရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မရနိုင်သောကြောင့် တိုင်းပြည် ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးယိုယွင်းရခြင်း အကြောင်း၏ အဓိကအချက်ကို ရှာဖွေလေ့လာရာတွင် ဗုဒ္ဓဘုရား၏ဆုံးအမသြဝါဒများကိုသာ အားကိုးအားထားပြုကြရာ အကြောင်းရင်းလေးခုကို တွေ့ရပေသည်။
• ပျောက်လျင်မရှာ၊ ပျက်တာမပြင်၊ ဆင်ခြင်မသုံး၊
• အသုံးဟော့ရမ်း၊ လူ့ပေါက်ပန်းကို၊
• ရှေ့ တန်းမှာတင်၊ ဤလေးအင် မှန်ပင်ပျက်စီးကြောင်း။ (အဂုင်္တ္တရနိကာယစတုတ္ထနိပါကပါဠိတော်)
မိမိက ထင်သလို့ချေမှုန်းနိုင်သူများ၏လှုံ့ ဆော်ရန်စမှုနှင့် ချို့ယွင်းချက်များကို ပညာရှိပီသ၍ သဘောထားကြီးစွာ ကိုင်တွယ် နိုင်စေမည့် စစ်မှန်သောသည်းခံခြင်းတရား (ခန္တီ) ကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူတို့ ကျင့်ကြံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြမ်းဖက်မူသည် ဗုဒ္ဓဝါဒ အဆုံးအမနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ပါသည်။
ရာဇောဝါဒဇာတ်တော်အရ မင်းကောင်း မင်းမြတ်တို့သည် -
• ဒေါသကြီးသူကို မေတ္တာနှင့် အောင်နိုင်၏။
• မကောင်းမှုကို ကောင်းမှုနှင့်အောင်နိုင်၏။
• စေးနဲခြင်းကို ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်ရာ၏။
အကြမ်းမဖက်ဘဲ ကရုဏာတရားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သူ အာသောကဘုရင်ကြီးကို စံပြဗုဒ္ဓဘာသာဘုရင်အဖြစ် မှတ်တမ်းနမူနာ ပြကြပါသည်။ အစိုးရသည် ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ခြင်း သီလနှင့်မညီသော အင်အားသုံးခြင်းတို့ဖြင့် နာခံမူ ရအောင် ကြိုးစား အားထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ၊ အမှန်တရားဖြင့် အောင်နိုင်ရန် (ဓမ္မဝိဇယ) ကိုသာ ဦးတည်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အရွက် နှင့် အပွင့်
အရွက်တွေသာ ရှိစဉ်က အတူတူ အစိမ်းရောင်သာ။ ပွင့်လာတော့ အရောင်အမျိုးမျိုး။ အဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့်သားသမီးတွေ၊ ကိုယ်စာသင်ပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင...
Cyber and Sidecar ဆိုက်ဘာနဲ့ ဆိုက်ကား
In our own ways ဒီမှာလည်း အောင်ပွဲ
Pinny dresses အေးစရာ
Medical Students ဆေးကျောင်းသားခေတ်
HIV Prevention ကာကွယ်ဆေး
9-9-1996 Press conference အစိုးရသတင်းစာဆိုတာ
Breaking news သတင်းထူးဆိုတာ
Noted Comments ကွန်မင့်တွေနဲ့ စကားပြောခြင်း
Risk of havingababy with Down Syndrome ဒေါင်းဆင်...
Ataglance ဦးသိန်းစိန် ၅ နှစ်အပေါ်သုံးသပ်ချက်
Points of Interest ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးနဲ့ မဟာဗျူဟာ
Breast Cancer writings ရင်သားကင်ဆာစာများ
MP Hostel အောင်ဆန်းဆောင်
Good orators (2) စကားပြောကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားတေ...
Different opinion အမြင်ချင်းမတူပါ
But I’m relieved ဝန်ကြီးချုပ် နောက်တယောက်
Hard to Heart ဟဒ်-တူ-ဟတ်
Sirens and Koel နွေဥသြသံများ
Good orators စကားပြောကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ
Asian Koel ဥသြတွန်သံ
Home Remedies to Eliminate Foot Odor ခြေနံ့ဆိုးခြင်း
How old are you? နေ့တဝက်မှာ အသက်မပြောချင်သူ (၁ဝ)ေ...
Traditional Nat worship အမေကြီးနတ်ပွဲ
Verbal Communication နှုတ်မှုရေးရာ
Resistance Day speech တော်လှန်ရေးနေ့ ကာချုပ်မိန့်ခ...
Home remedies ဆရာဝန်နည်းတွေထက် အလွန်လွယ်တဲ့ဆေးနည်းတွေ
Good dinner on Good Friday
Misleading Headings သတင်းလွဲများ
Rabbit and tortoise story ယုန်နဲ့လိပ်ကို ပုံပြဆို
Floating Water Hyacinth အဆင်းနဲ့ အလာ၊ ဗေဒါမအထွေး
The best part of fish ငါးမြင်းဗိုက်သား စားကြသူများ
HPV vaccines သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးများ
Meningococcal meningitis မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥ...
Cancer scans reduce risky operations ကင်ဆာကို စကန်...
Burma picture ပန်းချီဆန်တဲ့ မြန်မာပြည်
The picture of Burma ဆွဲချင်တဲ့ပန်းချီကား
A drop of water ပင်လယ်ရေတစက်
Gestational Diabetes ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆီးချို
Calcium အမျိုးသမီး၊ ကလေးနဲ့ ကယ်လ်စီယမ်
Father's Day ဖခင်နေ့
Color reflects the time နေညို မောင်းညိုချိန်
Cervical Squamous cell carcinomas သားအိမ်ဝကင်ဆာတမျိုး
Water hyacinth and duck weed ဘဲအုပ်က တရာနှစ်ရာ
My colleagues ကျွန်တော့်လူတွေ
Moving forward ရှေ့သို့
Mingalar Market Blaze
Age and Gender အသက်-ကျား-မ သြကာသ
Medical entrance ဆေးကျောင်းတက်ခွင့်
Pediatric Bacterial Meningitis ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ ဗ...
World Water Day ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ၂ဝ၁၆
How to ask မေးနည်းစည်းကမ်း
Bacterial Meningitis ဗက်တီးရီးယား ဦးနှောက်မြှေးရေ...
President Barack Obama has arrived in Cuba အိုဘားမ...
Sent from Burma အညာလက်ဆောင်
Shah Rukh Khan သတင်းမှားတယ်ထင်ပါတယ်
Down-to-earth ရွှေ ငွေ စိန် မြ ပကာသန ကင်းစင်
Bullock cart doctor လှည်းဆရာဝန် မဲဆရာဝန်
Aye Clinic, Pale ဆေးတိုက်၊ ပုလဲ
Lesson from Lee Kuan Yew လီကွမ်းယုကပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ
How many times ပုလဲအိမ် အကြိမ်ဘယ်လောက်
Diabetes and Tobacco ဆီးချိုနဲ့ ဆေးလိပ်
Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း
Love Burmese/Learn English မြန်မာစာ-အင်္ဂလိပ်စာ
Our grands မြေး
March 21st မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့
Saint Patrick's Day စိန့် ပက်ထရစ်နေ့
Omphalocele မွေးရာပါ ဗိုက်မလုံခြင်း
Aspiring gentleman လူကြီးလူကောင်း
Official Language အလယ်လူစကားဝဲ၏
Our villager တို့ရွာက
Preventive appendectomy အူအတက် ကြိုတင်ထုတ်ထားသင့်သလား
Zhulian Instant Coffee Plus ဇူလီယန်ကော်ဖီ
In the near distance စိမ်းနေသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြေ
Big Potato country ပုံ